Ɔhene Kores hyɛɛ mmara sɛ wonsi asɔrefi no (1-4)
Ahoboa a wɔde befi Babilon asan aba wɔn man mu (5-11)
1 Persia hene Kores+ afe a edi kan mu no, sɛnea ɛbɛyɛ a Yehowa asɛm a ɔnam Yeremia so kae no+ bɛba mu nti, Yehowa kanyan Persia hene Kores* ma ɔbɔɔ dawuru wɔ n’ahenni nyinaa mu, na ɔsan kyerɛwee+ sɛ: 2 “Sɛnea Persia hene Kores se ni, ‘Yehowa, ɔsoro Nyankopɔn no, de asaase so ahenni nyinaa ama me,+ na waka akyerɛ me sɛ minsi ofi mma no wɔ Yerusalem+ a ɛwɔ Yuda. 3 Obiara a ɔka mo ho a ɔsom no no, ne Nyankopɔn nni n’akyi. Ma ɔmforo nkɔ Yerusalem a ɛwɔ Yuda, na ɔnsan nkosi Yehowa, Israel Nyankopɔn fi a na ɛwɔ Yerusalem no.* Ɔno ne nokware Nyankopɔn no. 4 Obiara a ɔte baabiara sɛ ɔhɔho+ no, ma ɛhɔfo mma no dwetɛ, sika kɔkɔɔ, ahode, ne nyɛmmoa; afei wɔmfa ayamye afɔrebɔde biara a wɔwɔ mma no, na ɔmfa nkɔboa nokware Nyankopɔn no fi+ wɔ Yerusalem.’” 5 Ɛnna Yuda ne Benyamin agyanom mmusua mu mpanyimfo ne asɔfo ne Lewifo, wɔn a nokware Nyankopɔn no kanyan wɔn* nyinaa, yɛɛ ahoboa sɛ wɔresan akosi Yehowa fi a na ɛwɔ Yerusalem no. 6 Wɔn a wɔte bɛn wɔn nyinaa de dwetɛ ne sika kɔkɔɔ nneɛma, ahode, ne nyɛmmoa ne nneɛma foforo a ne bo yɛ den brɛɛ wɔn. Ɛno da nkyɛn a, wɔde ayamye afɔrebɔde nso kɔe sɛ wɔmfa nkɔboa Onyankopɔn fi no. 7 Bio nso, Ɔhene Kores de Yehowa fi nneɛma a Nebukadnesar kɔsesaw fii Yerusalem de koguu ne nyame fi no bae.+ 8 Afei Persia hene Kores de hyɛɛ sika sohwɛfo Mitredat nsa, na ɔkan ne nyinaa kyerɛw de maa Yuda abusuapanyin Sesbasar.*+ 9 Nneɛma no dodow ni: sika kɔkɔɔ nneɛma* 30, dwetɛ nneɛma* 1,000, nneɛma foforo 29, 10 sika kɔkɔɔ nkankyee nketewa 30, dwetɛ nkankyee nketewa 410, ne nneɛma a ɛkeka ho 1,000. 11 Sika kɔkɔɔ ne dwetɛ nneɛma no nyinaa si 5,400. Bere a Sesbasar ne nnipa a wɔde wɔn kɔɔ Babilon no resan aba+ Yerusalem no, saa nneɛma yi na ɔde bae.
^ Nt., “kanyan Persia hene Kores honhom.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Israel Nyankopɔn a ɔwɔ Yerusalem no fi.”
^ Nt., “wɔn honhom.”
^ Nt., “sika kɔkɔɔ a wɔayɛ no sɛ nkɛntɛn.”
^ Nt., “dwetɛ a wɔayɛ no sɛ nkɛntɛn.”